Hacksaw All Stars - Myanmar Sports
🎁 HACKSAW ALL STARS 🎁
💰 € 2,500 ( ယူရို ၂,၅၀၀ ) အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Hacksaw All Stars ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ် 💰
Hacksaw All Stars ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး € 2,500 ( ယူရို ၂,၅၀၀
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 24. 05. 2022 – 30. 05. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၄ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၃၁ မိနစ် ( 24 May 2022 00:01 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 30 May 2022 23:59 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဆုကြေးများ ( prizes Of Hacksaw All Stars ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Qualifying 1xBet “ Hacksaw All Stars ” games: အကျုံးဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ –
Itero – အစရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၁။ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ( 1xBet tournament registration ) စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ပရိုမိုးရှင်း စာမျက်နှာကိုသွားပြီး “ Take part ” ခလုတ်ကို နှိပ်ရပါမည်။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( Hacksaw All Stars 1xBet ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( Hacksaw All Stars ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xbet Hacksaw offer ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( Tournament Hacksaw Gaming ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။